PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - SIZIPHOLELE:
Ilanga langeSonto - 2017-11-05 - Izindaba - LUCKY CAIN
ILANGA likhipha umkhovu etsheni, ngisemotweni ngivule isiqandisi ngilalele umculo opholile kanaima K lapho kudlala khona ingoma esihloko sithi, “Thando”.
Le ngoma igabe ngamagama athi “Uthando lungihlukumezile, lungishintshile ingqondo”.
Kulowo mzuzu ngijulile ngothando njengoba kusamele ngishadelwe. Nokho asidlule kokuthinta impilo yami yangasese. Phela yonke le micabango ifika nje ngilibangise emgwaqweni wodumo, uflorida, ethekwini lapho ngiyophola khona nozime wesifazane oshadile.
Lo zime useke wangenela imincintiswano eyahlukene yabashadile okubalwa nokamrs South Africa. Nakuba ekhale ngap h a - kokamrs
Africa kodwa ikhona aseke wahlabana nsi kuyo okubalwa umrs Tourism South Africa nomrs Tourism Africa kanti muva nje uhlabane ngokamrs Tourism International awunqobe ngeledlule emcimbini obusephilippines.
Njengoba ngehla emotweni ngilinde ukuwela umgwaqo ngiyohlangana nalo zime sengizakhele esami isithombe ngaye njengoba ngingakaze ngimbone (ngeke ngande ukuthi benginasiphi isithombe ngaye kodwa engingakusho wukuthi leso sithombe ebenginaso emqondweni sehluke kakhulu kulo muntu engihlangana naye).
Besivumelene ukuthi sizohlangana ngesikhathi esithile kodwa sesishaye sadlula leso sikhathi esivumelane ngaso - ngakho ngingena ngiyatatazela ngoba angizwani nokulindisa umuntu, ikakhulukazi uma kuyinto ephathelene nomsebenzi.
Ngeshwa ngifika naye akakafiki, ngehlisa umoya ngithenga isiphuzo esibandayo ukwehlisa ukushisa njengoba nesisho sithi “umfundisi ulindwa ngeculo”.
Kuthi lapho ngingazelele kutheleka owesifazane oswenke ngengubo emhlophe emfishane, ebukeka sengathi inokotini abalengayo kanti yimihlobiso.
Ngisazibuza engqondweni ukuthi ngabe nguyena lo engizohlangana naye abe esondela ezozethula kwazise ubesengibonile. Untombifuthi Gumede ngeke usho ukuthi ngowesifazane oshadile onezingane ezine njengoba ebukeka eseyintokazi kwazise unomzimba okhombisa ukuthi ukukhonzile ukuzivocavoca nokudla ukudla okunempilo. Uyaxolisa ngokufika sekwedlule isikhathi kanti ukhala ngokukhathala njengoba sihlangana ngemuva kosuku ebuyile phesheya kwezilwandle lapho edle khona umhlanganiso. “Bekumele ngithulule izimpahla eziningi kanti nomuntu osizayo endlini akekho. Ngikhuluma nje angikakutholi ukuphumula ngemuva kwendiza eza kuleli ethathe amahora ayi17,” esho ehlala phansi egoqa imilenze (ebhala u-4).
Uthi uzalelwe enanda, enyakatho yetheku, lapho eqale khona ukwenza okuningi esakhula.
“Ukumodela ngikuqale ngisakhula khona enanda. Awukho uzime wakule ndawo ebengingawungeneli njengoba nginqobe eminingi yawo,” kusho untombi njengoba ebizwa kanjalo ngabasondelene naye.
Uthi esesesikoleni samabanga aphakeme uthathe ikhefu emincintiswaneni kazime njengoba bekumele agxile ezifundweni zakhe. Uphothule umatikuletsheni wakhe, wenza izifundo zobuthishela kodwa wagcina engaziphothulanga.
“Bese kusele kancane ukuba ngiziphothule kodwa ngayeka njengoba benginentshisekelo yokungena ebhizinisini,” esho inkulumo ishelela njengoba kuvele kwangicacela ukuthi nakuba ebukeka engumuntu ozothile kodwa uyazikhulumela uma into eyizwa ngaphakathi.
Uthi ngenxa yokufisa ukungena ebhizinisini lezimo eziphuthumayo uphoqeleke ukuba enze izifundo zeparamedic, aziphothulile wabe esesungula inkampani yakhe, i-eyethu Emergency Services.
Uphinde wenza nezebeauty Therapy njengoba enendawo yokunakekela imizimba yezingane. Njengoba sixoxa kuyangifikela ukuthi njengoba engowesifazane omatasa, ongenela imincintiswano eyahlukene futhi enamabhizinisi ngabe isikhathi somndeni wakhe usithathaphi?
“Nginenhlanhla ngokuba nomyeni ongesekayo emaphusheni enginawo, ngakho siyabambisana ikakhulukazi ezintweni zasendlini njengoba ezifela ngokupheka nami ngisiza ngokunye,” esho eba manqika ukugagula igama lomyeni wakhe, udkt Nkosinathi Gumede.
“Ungumuntu ongakukhonzile ukugqama ngakho ngokumhlonipha ngizocela ukungalisho igama lakhe,” esho emoyizela ephulula indandatho yakhe emunweni kucaca ukuthi usazifela ngomyeni wakhe.
Echaza ngomncintiswano kamrs Tourism uthi ngemuva kokukhala phansi kokamrs South Africa, abakwapageant SA bamcelile ukuba ayomela isifundazwe kokamrs Tourism SA.
“Ngivumele phezulu njengoba ngingumuntu ozifelayo ngezokuvakasha. Nebala ngifike ngawunqoba, ngadlulela e-africa nakhona ngazidlela amahlanga njengoba senginqobe lo kamrs Tourism International ebengimele kuwo iningizimu Afrika,” esho ngokuzigqaja.
Uma ngimbuza ukuthi uke wakucabanga ukungenela umiss South Africa uphendula ngokuthi nakuba ebenesifiso kodwa bekungelula njengoba kuningi abesagxile kukhona futhi esathathe ikhefu emincintiswaneni kazime, ngakolunye uhlangothi esakhulisa nezingane zakhe nomshado. Ngaphandle kokuba semabhizinisini nokungenela imincintiswano yozime, uthi uyazifela ngokusiza abahlwempu, ikakhulukazi izingane zamantombazane eziqhamuka ezindaweni ezahlukene.
Uthi unenhlangano ezimele engenzi inzuzo ebizwa ngento Gumede Foundation esiza ukuhambisa imisubela nemifaniswano ezikoleni ezahlukene Kwazulu-natal nasemazweni angomakhelwane, okubalwa kuwo imozambique nebotswana.
“Ngiyazifela ngokuthuthukisa intsha yesifazane ngoba kuyangithokozisa ukubona abesifazane bephumelela emikhakheni eyahlukene,” kusho untombi oseneminyaka eyisikhombisa eshadile.
Uthi lesi sicoco sikamrs Tourism International sisho lukhulu kuyena ngoba sizoba yindlela azo-khangisa ngayo ini-ngizimu Afrika, ikwazulu-natal netheku okuyidolobha azalelwe wakhulela kulona. Akawuvali umlomo ngobuhle beningizimu Afrika uma eqhathanisa namazwe aseke wawavakashela.
“Kumele siqale ekhaya, abantu bakuleli kumele bazigqaje ngokuthi bazalwa kuleli lizwe. Iningizimu Afrika yizwe elihle kakhulu kanti okudabukisayo wukuthi abantu bakuleli bahlale bengakuqapheli lokhu. Lokhu ukubona uma usuhambele amazwe amaningi lapho ubona ukuthi sibu- siswe ka-njani emzansi,” esho engeza ngokuthi uyafisa ukukhuthaza intsha ukuba iziqhenye ngezwe layo. Sengizitshela ukuthi siyayiphothula ingxoxo yethu uvele wangimangaza engitshela ukuthi ungudj okwazi ukuklwebha amapuleti ezindaweni zokujuxuza.
“Uma ungase uhambele indawo yokujuxuza esenkabeni yeTheku, Ogwini Night Club, imvamisa ngolwesihlanu ngijwayele ukudlala khona. Ngikhuluma nje ngiqashiwe enigeria lapho ngizobe ngiklwebha amapuleti emcimbini kamiss Fitness Africa,” esho ehleka kuvela amazinyo amahle awuthotho. Uthi uphinde abe nesiqephu esiteshini somphakathi, ivibe FM, Kwamashu lapho esuke ekhuluma khona ngezinto ezithinta ukuthuthukisa abesifazane. “Empeleni elinye lamaphupho ami wukungena emsakazweni ngibe nohlelo lwami kweminye yemisakazo emikhulu kuleli kodwa okwamanje ngisalijabulela ithuba lokuba kwiVibe FM ngoba ngiyakwazi ukuxhumana nabantu abasha,” kugoqa yena. Kube wukuphetha kwethu ingxoxo, wasukuma, savalelisana. lucky. cain@ilanganews. co.za